မော်စီ နှင့် သူ၏အိပ်မက်များ: April 2008
မင်္ဂလာပါဗျာ။ ဘလော့မောင်နှမများအားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ လုပ်ချင်တာတွေလည်း လုပ်ခွင့်ရှိကြပါစေဗျာ။ ကျနော်အဓိက ပြောချင်တာက ဘာတဲ့ မေ့ချင်နေသလိုလိုဖြစ်နေတယ် ( စဉ်းစားစမ်း. . .မော်စီ ) အော် ဒီလိုပါ ကျနော်အခုတလော နည်းနည်းရှုပ်နေလို့ အဲဒါ ပိုစ့်တင်တာတို့ ဘလော့လည်တာတို့ သိပ်အဆင်မပြေသေးဘူးခင်ဗျ။ မကြာပါဘူး အခုတလောလေးပါပဲ။ မကြာမှီမှာ ကျနော်ပိုစ့်တင်ဖြစ်မှာပါ။ လာရောက်လည်ကြတဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမ များကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ရေးသားသူ မော်စီ at 7:52 AM 1 ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော်တို့ မြန်မာစကားပုံတွေထဲက ``ဘူးတစ်လုံးဆောင် အိုတောင်မဆင်းရဲဘူး´´
ကြားဖူးကြမှာပေါ့။ အဲဒီစကားပုံကို ကျနော့်အတွေးလေးနဲ့ ပုံပြောင်းထားပါတယ်။
အဲဒါကတော့ `` No တစ်လုံးဆောင် အိုတောင်မဆင်းရဲဘူး´´ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စကားပုံ (ပုံပြောင်း) ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ကျနော်ရှင်းပြပါ့မယ်။
ဘူး= ငြင်းဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ် (မယူဘူး၊ လက်မခံဘူး၊ မကြိုက်ဘူး၊ မသွားဘူး . . .)
No = (မြန်မာဘာသာပြန်ရင်) ငြင်းဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်
ဘူး = ငြင်းဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်
No = ငြင်းဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်
ဘူး = No
ဘူး နေရာမှာ No ကို အစားသွင်းလိုက်တော့
``No တစ်လုံးဆောင် အိုတောင်မဆင်းရဲဘူး ´´ ဆိုတဲ့ စကားပုံ ရရှိလာပါတယ်ဗျာ...
ရေးသားသူ မော်စီ at 7:51 PM4ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကွန်ပြူတာ ပရင်တာ (Printer) အန္တရာယ်
ကျနော် နိုက်တင်ဂေး ကျန်းမာရေးဂျာနယ်မှ ကွန်ပြူတာ ပရင်တာအန္တရာယ် အကြောင်းကို မျှဝေချင်လို့ ပိုစ့်အဖြစ်တင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုက်တင်ဂေး ကျန်းမာရေးဂျာနယ်ကို မဲဆောက်မြို့ရှိ မယ်တော်ဆေးခန်းမှ ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ကွင်းစလန်းစက်မှုတက္ကသိုလ်က သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာစူးစမ်းမှုအရ ရုံးသုံးပုံနှိပ်စက် (ကွန်ပြူတာ ပရင်တာ) တွေကထွက်လာတဲ့ အမှုနလေးတွေဟာ စီးကရက်မီးခိုးငွေ့မှာပါတဲ့ အမှုန်တွေလိုပဲအဆုတ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေတယ်လို့ တွေ့ရှိထားပါတယ်။
ပရင်တာ အမျိုးမျိုးအလုံး ၆၀ ကျော်တို့ လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ သုံပုံတစ်ပုံလောက်ဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ တိုနာ (Toner) မင်အမှုန်အမွှားတွေကို လေထဲထုတ်လွှတ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအမှုန်လေးတွေဟာ အင်မတန်မှ သေးငယ်တဲ့အတွက် အဆုတ်တွေထဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပြဿနာအမျိုးမျိုးကအစနာတာရှည်ရောဂါတွေအထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ရုံးခန်းတွင်း မှင်အမှုန်ပမာဏဟာ မှင်ဗူးအသစ်တွေ သုံးတဲ့အချိန်နဲ့ မှင်ပိုလိုတဲ့ ရုပ်ပုံတွေ ဓါတ်ပုံတွေ ပုံနှိပ်တဲ့အချိန်မှာ ပိုမြင့်လာတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပရင်တာတွေကို လေ၀င်လေထွက်ကောင်းတဲ့ နေရာတွေမှာထားဖို့နဲ့ အစိုးရတွေက ရုံးသုံးပရင်တာတွေအပေါ် ကြီးကျပ်ကန့်သတ်ချက်တွေ ချမှတ်ပေးဖို့ သုတေသီတွေက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
အင်း . . . . ကျနော်တို့ ပရင်တာတွေကို သုံးတဲ့အခါမှာ သတိထားရတော့တာပေါ့။ အထက်ကပြောခဲ့သလိုပဲ ပရင်တာကို လေ၀င်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာ ထားသင့်တာပေါ့နော်။ ကျနော် ဒီအကြောင်းကို နိုင်တင်ဂေး ကျန်းမာရေးဂျာနယ်မှ ကောက်နုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:06 PM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ငါ့ဘက်ကတော့ . . .
ဒီမှာ မိန်းကလေး . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:16 PM 10 ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
အချိန်တွေကြာညောင်းလာတော့ မမေ့နိုင်သေးတဲ့အတိတ်ကဖြစ်ကြောင်းလေးတွေကို သတိရမိပါတယ်။ အတိတ်ဆိုတာ ကျော်လွန်သွားခဲ့ပေမယ့် မေ့မရတဲ့အရာတွေကတော့ ကျန်ရစ်နေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကို မေ့ကောင်းမေ့နိုင်ကြပေမယ့် မေ့လို့မရတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကိုတော့ တိုက်ဆိုင်တိုင်း သတိရတတ်ကြပါတယ်လေ။ ကျနော်ရဲ့ အတိတ်ကကြောင်းလေးတစ်ခုကို ဖော်ပြခြင်ပါတယ်။
ကျနော်ဆယ်တန်းကို အ.ထ.က (၆) မော်လမြိုင်မှာအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ ၉တန်းအထိကို မုဒုံ အ.ထ.က (၁) မှာနေခဲ့ပါတယ်။ မုဒုံမြို့ အ.ထ.က (၁) ကျောင်းက မွန်ပြည်နယ်မှာ နာမည်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆယ်တန်းရောက်တော့ ကျနော်မော်လမြိုင်ကိုပြောင်းခဲ့တယ်။ မုဒုံမြို့မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ဆယ်တန်းအဆောင်တွေ အများကြီးပါ။ အဆောင်တွေက ကောင်းလည်းတစ်ကယ် ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် မော်လမြိုင် တောင်ဝိုင်းနားက ဆယ်တန်းအဆောင်မှာ လာနေခဲ့ တယ်လေ။ အဲလိုပဲ ကျနော်ဆယ်တန်းကို မော်လမြိုင်အမှတ် (၆) ကျောင်းမှာတက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ အမှတ် (၆) ကျောင်းဆိုတာ ဟို ရုပ်ရှင်မင်းသမီး နန္ဒာလှိုင်နေခဲ့ဖူးတဲ့ ကျောင်းဆိုပဲဗျ။ ကျနော်လည်းအသေအချာတော့မသိပါဘူး။ စာကြည့်တိုက်မှာဓါတ်ပုံတွေကိုတော့တွေ့တယ်ဗျ။
အဲလိုနဲ့ ကျနော် အမှတ်(၆)ကျောင်းမှာ ဧည့်သည်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျင်လည်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်က ကျောင်းသားသစ်ကိုဗျနော်။ အမှတ်(၆)က ကျောင်းသူတွေလည်း ချောသားဗျ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ မုဒုံ အမှတ်(၁)က ကျောင်းသူတွေကို မမှီပါဘူးဗျာ။ အဲ ကျောင်းသူတွေချောတာ ကျနော်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး ကျနော်က ကျောင်းစာကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာလေ ဟဲဟဲ။
ကျနော်တို့ဆယ်တန်းအဆောင်က မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်နားမှာရှိနေတာဗျ ကျနော်တို့ အဆောင်နားမှာလည်း တက္ကသိုလ်အဆောင်တွေရှိတယ်လေ။ အဲကျနော်က ဆယ်တန်းကတည်းက တက္ကသိုလ်ကိုရင်းနှီးနေခဲ့တာပေါ့။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေကိုလည်း ငမ်းရ အဲ ဟုတ်ပါဘူး တွေ့နေရတာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ အဆောင်က ၅နာရီခွဲလောက်ဆို အပြင်ခဏပေးထွက်တယ် အဲဒီအချိန်ဆို တက္ကသိုလ်က မမ ကိုကို တွေကလည်း ထမင်းထွက်စားတာတို့ အပြင်ထွက်ပြီး ဆိုင်ထိုင်တာတို့နဲ့စည်နေတာပေါ့ဗျာ။
ကျနော်တို့အဆောင်က စည်းကမ်းကကြီးတယ်ဗျ။ ၆ နာရီထိုးရင် အကုန်လုံးဘုရားရှိခိုးရတယ် ၁၅ မိနစ်လောက် တရားထိုင်ရတယ်။ အဲဒါပြီးရင် ၁၁နာရီအထိစာကျက်ရတယ်။ အဲလိုနဲ့ဖြတ်သန်းရင် ပထမအစမ်းကို ဖြေလည်းပြီးရော ကျနော်တို့ကျောင်းမှာ ကျောင်းပျက်တဲ့လူကများလာတယ်လေ။ ကျောင်းမတက်ကြတော့ဘူး အိမ်မှာပဲ စာကြိတ်ကျက်ကြတာပေါ့လေ။ ကျနော်ကတော့ ပုံမှန်ကျောင်းတက်လျက်ပါပဲ။ ကျောင်းမှာ ကျောင်းသားတွေသိပ်မရှိတော့ ဆရာ၊ဆရာမတွေကလည်း စာသိပ်မသင်ကြဘူးလေ။ အဲဒီတော့ ကျနော်က အားနေတာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အဖော်စပ်ပြီး တောင်ပေါ်တန်းကို ကျောင်းပြေးပြီး ခိုးသွားကြတယ်။ ပျော်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ တစ်ကယ် ခိုးသွားရလို့လားမသိဘူး။
တောင်ပေါ်တန်းကနေကြည့်လိုက်ရင် မော်လမြိုင်တစ်မြို့လုံးကိုမြင်ရတယ်ဗျ။ အဲနောက်တော့ ထန်းရည်ကို လည်း ၀ါးကျဉ်ထောက်နဲ့ရောင်းသေးတယ်ဗျ။ သောက်လို့ကောင်းတယ်နော် မယုံမရှိနဲ့ သောက်ကြည့် တစ်ကယ် ကောင်းတယ်။ တောင်ပေါ်တန်းက ဘုရားတွေကိုဖူးရင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ကြသေးတယ် ဗျ။ အင်မတန်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ အတိတ်ကဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျနော်လည်း ကျောင်းသိပ်မတက်ဖြစ်ပဲ အဆောင်မှာပဲစာတွေကျက်ဖြစ်ခဲ့တယ် စာမေးပွဲဖြေတဲ့ အထိပေါ့ဗျာ။ ကျနော်ဆယ်တန်းတစ်နှစ်တာ မော်လမြိုင်မှာနေထိုင်ခဲ့တာပါ။ ဆယ်တန်းပြီးတော့ မုဒုံမှာ ပြန်နေ ခဲ့ပါတယ်။ မုဒုံမှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေလျှောက်လည် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နဲ့ အချိန်တွေအကြာကြီးဖြုန်းနေမိပါတယ် အဲလိုနဲ့ပဲ . . .
အဲဒီအထဲမှာ ကျနော်ပါတယ်ဗျ အသူလဲဆိုတာကိုတော့ ပြောပြဘူး . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 10:42 PM9ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
သက္ကရာဇ် ၁၃၇၀ ခု၊ တန်ခူးလဆန်း ၁၂ ရက်နေ့ မှာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သစ်ရဲ့ နေ့သစ်လေးမှာ ကျနော်ရဲ့ဘလော့ဂါမောင်နှမများ အားလုံး လိုအင်ဆန္ဒများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ။
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့နဲ့ပက်သက်ပြီး ကျနော်တို့နယ်အကြောင်းနည်းည်းပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့နယ်မှာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာလည်း ရေကစားကြတယ်ဗျ။ ဒီနေ့ကတော့ အစည်ဆုံးပါပဲဗျာ။ ရေကစားတဲ့ နောက်ဆုံးရက်ကလေးပေါ့။ မနေ့က အတက်နေ့ဟာ မော်လမြိုင်မြို့စည်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတာနဲ့ ကျနော်ပိုစ့်မတင်ဖြစ်လိုက်ဘူးဗျာ။
ဒီနေ့ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့က ရိုးဂိုးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အင်မတန်ကို စည်ကားပါတယ် ကိုယ်တိုင်သွားပြီး မြင်စေချင်တယ်ဗျာ။ ရိုးဂိုးဆိုတာ ရွာကလေးတစ်ရွာပါပဲ။ ရိုးဂိုးတည်နေရာလေးကို ကျနော်ပြောပြပါ့မယ်။ ရိုးဂိုးရွာက မော်လမြိုင်မြို့နဲ့ ၈ မိုင်ကျော်ကျော်လောက်ဝေးပါတယ်။ မော်လမြိုင်နဲ့ မုဒုံ တို့ရဲ့ အလယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ မော်လမြိုင်နဲ့မုဒုံက ၁၈ မိုင်ဝေးပါတယ်။ ရိုးဂိုးရွာက ဖားအောက်ရွာနဲ့နီးကပ်နေပါတယ်။ ကျနော့်အထင် ကိုက် ၄၊ ၅ ရာလောက်ပဲဝေးပါတယ်။ ဖားအောက်ရွာမှာက ဖားအောက်တောရကျောင်းနဲ့ ကျနော်တို့ GTC ကျောင်းတည်ရှိနေပါတယ်။
ရိုးဂိုးရွာမှာ ရိုးဂိုးစေတီတော်တည်ရှိပါတယ်။ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့က ရိုးဂိုးစေတီတော်ရဲ့ ပွဲတော်လေး တစ်ခုပေါ့။ ရိုးဂိုးရွာမှာ ရေစိုမုန့်တီက အရမ်းနာမည်ကြီးတယ်ဗျ။ ကျနော်သိတာပေါ့ ကျနော်က အတန်းလစ်ပြီး သွားစားနေကျလေ။ ဘူးသီးကြော်ကလည်း ရှယ်ပဲဗျို့ ဟီးး ပြောရင်းနဲ့တောင် သွားရည်ကျလာပြီးဗျာ။
အဲ သင်္ကြန်အကြောင်းလေး ပြောပြပါမယ်။ ကျနော်တို့ ရေပက်ခံထွက်တဲ့သူတွေက စေတီတော်ကိုပတ်ပြီး လည်ကြတာပါ။ အင်မတန်ကိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ။ ရိုးဂိုးရွာက စေတီတော်နဲ့နီးတဲ့အိမ်တွေမှာဆို လာသမျှလူတွေကို ထမင်းလည်းဖိတ်ကျွေးတယ်ဗျ။ သင်္ကြန်ထမင်းတို့ဟို မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းသူ စားချင်တဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်လည်းပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ အင်မတန်ကို ဖော်ရွေတဲ့ ရွာကလေးတစ်ရွာဖြစ်သလို ရိုးဂိုးသူတွေ ကလည်း ဧည့်ဝတ်ကျေကြတယ်ဗျ။
ရွာဝင်အ၀ကနေ စေတီကိုရောက်ဖို့ ကိုက် ၃၀၀ ကျော်ကျော်လောက်ရှိတယ်ဗျ။ အဲဒါ စေတီကိုရောက်ဖို့ အချိန် တစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်ပေးရတယ်။ ၁၂ နာရီလောက်ရောက်သွားရင် ၃ နာရီလောက်မှ ပြန်ထွက် ရတယ်။ အဲဒီလောက်စည်တာပါ။ ရေပက်ခံထွက်တဲ့ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ များလွန်းလို့ တစ်နယ်လုံးမှာရှိတဲ့ ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ လာစုနေတယ်များအောက်မေ့ရတယ်ဗျာ။ တစ်ခေါက် လောက်တော့ လာနွှဲစေချင်တယ်ဗျာ တစ်ကယ်ပါ။
အဲရိုးဂိုးကနေ ကိုယ့်မြို့ကို ပြန်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆို မုဒုံမြို့ကို အားရကျေနပ်တဲ့အထိ မြို့ပတ်ကြပါတယ် မဏ္ဍပ်တိုင်းကလည်း နောက်ဆုံးနေ့ဆိုပြီး ရေပက်ကြတော့ အင်မတန်ကိုပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ၆နာရီ ထိုးတဲ့အထိ ရေကစားကြပါတယ်။ ဗဟိုမဏ္ဍပ်မှာလည်း ၆ နာရီးထိုးခါနီးမှာ သင်္ကြန်ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့ သီချင်းဆိုတော့ ရင်ထဲမှာတစ်မျိုးကြီးပဲဗျာ။ ၆ နာရီလောက်မှာတော့ ကျနော်တုိ့ရဲ့သင်္ကြန်ပွဲကို အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ သင်္ကြန်အလွမ်းတွေကို ဤမျှနဲ့ရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်ချစ်တဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမများအားလုံး ကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်သာပြီး လိုအင်ဆန္ဒများနဲ့ပြည့်စုံပါစေဗျာ . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 7:57 PM6ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ဒီနေ့က အကြတ်နေ့တဲ့ ကျနော် သင်္ကြန်ရက်တွေထဲမှာ ဒီနေ့ကိုအလွမ်းဆုံးပဲဗျာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီနေ့က ကျနော်နေတဲ့မြို့ရဲ့ နေ့လေ။ အကြတ်နေ့ကို မုဒုံမြို့ရဲ့နေ့လို့ သတ်မှတ်ထားကြတော့ ဒီနေ့က မုဒုံမြို့မှာ စည်တာပေါ့ဗျာ။ အဲ အကြတ်နေ့ နှစ်ရက်ကျတဲ့ အခုလိုနှစ်မျိုးဆို မုဒုံမြို့က နှစ်ရက်စည်တာပေါ့ဗျာ။
ရေပက်ခံထွက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံး ကားနဲ့ရော ဆိုင်ကယ်နဲ့ရောပေါ့ မုဒုံမြို့ကို ဦးတည်ပြီး ချီတက်လာကြ ပါတယ်။ ၁၀နာရီကျော်ကျော်လောက်ဆို မုဒုံမြို့မှာ စည်နေပါပြီး။ လာကြပါပြီး ရေပက်ခံထွက် လာတဲ့သူတွေ ရေပက်တဲ့သူတွေနဲ့ လုံးဝကိုအပေးယူမျှနေပါပြီး။ ကျနော် ဒီနေ့ကို အလွမ်းဆုံးပဲဗျာ ပြောရင်းနဲ့တောင် ပြေးပြန်ချင်လာပြီး။ ကျနော့်ကို မတားကြနဲ့နော်။
ရေပက်တဲ့မဏ္ဍပ်တွေကလည်း များတယ်ဆို တစ်အိမ်ခြားတစ်ခု နှစ်အိမ်ခြားတစ်ခု ဆိုသလိုရှိနေတာလေ။ အဲ ဗဟိုမဏ္ဍပ်မှာတော့ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ဗျာ ဆိုတဲ့လူကဆို ကတဲ့လူက ကဆိုတော့ ဘာပြော ကောင်းမလဲ မဟိုမဏ္ဍပ်ကိုရောက်ဖို့ ကိုက် ၃၀၀ လောက်မှာ ရေပက်ခံထွက်တဲ့ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ ဒီအတိုင်းရပ်နေကြရတယ်။ ကဲစဉ်းစားကြည့် ဘယ်လောက်စည်သလဲဆိုရင်။ ရေပက်ခံထွက်တဲ့သူကို မုန့်လုံးရေ ပေါ်တို့ ခေါက်ဆွဲကြော်တို့ကို အိတ်ကလေးတွေနဲ့ထည်းပြီး ကျွေးကြပါတယ်။
ကျနော်တို့ ရေပက်မဏ္ဍပ်က မြို့ထဲအ၀င်ဝမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ ရေပက်ခံထွက်တဲ့သူတွေ တစ်ယောက်မှ မလွတ်ဘူးလေ။ ကျနော်တို့မဏ္ဍပ်မှာ သင်္ကြန်သီချင်းတွေ ဟစ်ဟော့ပ်သီချင်းတွေကို Sound Box တွေနဲ့ဖွင့်ပြီး ကဲနေကြတာပေါ့ဗျာ။ အဲ ကျနော်ပြောရင် ကြွားတယ်ထင်မှာစိုးလို့ မပြောဖို့စဉ်းစားပါသေးတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် မပြောလို့မဖြစ်ပြန်ဘူး မုဒုံသူတွေနော် တစ်ကယ်ချောတယ် မယံမရှိနဲ့ မချောတဲ့သူတွေဆို လက်ချိုးရည် လို့ရတယ် အားလုံးနီးပါကို ချောကြတာ။ ကိုယ့်မြို့သူလို့ ကြွားတာမဟုတ်ဘူးနော်မယုံရင် လာလည်ကြည့် ပေါ့ဗျာနော်။
၁၂ နာရီ ကျော်ကျော်လောက်ဆို ရေပက်ခံထွက်တဲ့သူတွေ နည်းည်းပါးသွားလို့ ကျနော်တို့မဏ္ဍပ်မှာ ခေါက်ဆွဲကြော်တို့ မုန့်လုံးရေပေါ်တို့ လုပ်စားကြတယ်လေ။ ကျနော့်အစ်မလို ခင်တဲ့အစ်မတစ်ယောက်က ခေါက်ဆွဲကြော်တာ အင်မတန်ကောင်းတယ်နော်။ စားပြီးရင် ဆွေမျိုးတွေကိုတောင် ခဏမေ့နေသေးတယ်။ ခေါက်ဆွဲကြော်စားလိုက် ယောကျာ်းလေးဆိုရင် အချမ်းပြေ ရေနွေးကြမ်းလေးသောက်လိုက်နဲ့ပေါ့။ ရေနွေးကြမ်းဆိုတာ ကို 99 သိတယ် မသိရင်သူ့ကိုသွားမေးကြည့်ဗျာ။
အဲ ၂ နာရီလောက်မှာဆို မုဒုံမှာပြန်စည်ကြပါပြီး။ ရေပက်ခံထွက်တဲ့ကားတွေ အပြန် မုဒုံမြို့ကို ထပ်ပတ်ကြပါတယ်။ ရေပက်ခံထွက်တဲ့သူတွေက နေ့လည်လောက်မှာဆို မော်လမြိုင်ကဆို သံဖြူဇရပ်တို့ ကျိုက်က္ခမီတို့ဘက်ကို ဆင်းသွားကြတယ်လေ။ ၂ နာရီလောက်ကနေ ၄၊ ၅ နာရီလောက်အထိစည်တယ်ဗျာ။ ညရောက်တော့လည်း ဗဟိုမဏ္ဍပ်မှာ အဆိုအကတွေ တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာ။ အရင်တုန်းကဆို နာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေလည်း လာကြတယ်ဗျ။ အခုဆို မလာတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ အဆိုတော်တွေလည်း တစ်နေရာတည်းမှာစုဆိုနေကြတယ် ထင်ပါ့ဗျာ။
အဲမေ့လို့ ကျနော်တို့ မုဒုံက ကောင်လေးတွေလည်း ချောတယ်ဗျနော်။ တစ်ကယ်မယုံဘူးလား မယုံရင် ကျနော့်ကိုမေးကြည့်ပေါ့ဗျာ။ အင်း မနက်ဖြန်လည်း မုဒုံမြို့မှာ စည်အုံးမယ်ဗျာ။ အော် သင်္ကြန်ရယ် အရမ်းကိုလွမ်းမိနေတယ်ဗျာ . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:02 PM6ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကို 99 ဆီကမလာတာ
ဒီနေ့ တန်ခူးလဆန်း ၈ ရက် သင်္ကြန်အကျနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ရေကစားပွဲကြီးကို ခမ်းမ်းနားနား စတင်ကစားနေကြပါပြီး။ မဏ္ဍပ်ကိုယ်စီနဲ့ ရေပက်တဲ့သူနဲ့ ရေပက်ခံထွက်တဲ့သူတွေ အပေးအယူမျှနေကြရောပေါ့ဗျာ။ သင်္ကြန်အကျနေ့ဆိုရင် ကျနော်တို့နယ်မှာဆို ကျိုက်မရောမြို့မှာ စည်တယ်ဗျို့။ နယ်မှာရှိတဲ့ ရေပက်ခံထွက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံး ဒီနေ့ဆို ကျိုက်မရောမြို့ကိုချီတက်ကြပါတယ်။
၁၀ နာရီ ၁၁ နာရီ လောက်ဆို ကျိုက်မရောမြို့မှာ ဘာပြောကောင်းမလဲဗျာ။ မဏ္ဍပ်တွေကလည်းများတယ်ဗျို့။ ရေပက်နေတဲ့ ကျိုက်မရောသူတွေကလည်း ချောတယ်ဗျို့။ ဘာဆေးတွေစားပြီး ချောလှနေကြတာလဲတော့မသိဘူး။ တစ်ကယ်ပါ ကျနော်ကြွားတာမဟုတ်ဘူး။ မယုံရင် မွန်ပြည်နယ် သင်္ကြန်လာလည်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။
အဲ တစ်ချို့မဏ္ဍပ်တွေမှာဆို မုန့်လုံးရေပေါ်တွေကျွေးတယ်ဗျ။ မုန့်တွေကို အိတ်ကလေးနဲ့ထည့်ပြီး ရေပက်ခံထွက်တဲ့သူတွေကို ကျွေးတယ်လေ။ ဗိုက်ဆာနေတာလားတော့မသိဘူး စားလို့တော်တော်ကောင်းတယ်နော်။ တစ်ခါတစ်လေလည်း ငရုတ်သီးလေး ၀ါးမိတာပေါ့ဗျာ။
ကျိုက်မရောမြို့ကနေ ထွက်ရင် မော်လမြိုင်မြို့ကို ပတ်ကြတယ်ဗျ။ ဒီနေ့က မော်လမြိုင်မှာ ကျိုက်မရောလောက်မစည်ဘူးလေ။ ဒီနေ့က ကျိုက်မရောနေ့ ဆိုတော့ ကျိုက်မရောမြို့မှာ အစည်ဆုံးပဲ။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်မြို့ကို ကိုယ်ပြန်ကြတာပေါ့။ ညနေစောင်းရင်တော့ မြို့တိုင်းမှာ စည်ပြန်ရောဗျ။ ရေပက်ခံထွက်တဲ့သူတွေ ပြန်လာရင် မြို့ပတ်ကြတယ်လေ။
အဲ သတိရတယ်ဗျာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြန်ချင်လိုက်တာ။ နေရထိုင်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ သင်္ကြန်တွင်းလေးတောင် မြန်န်ကျော်စေချင်ပြီးဗျာ။ အင်း . . . မနက်ဖြန်ဆို အကြတ်နေ့ ကျနော်တို့မြို့ရဲ့ နေ့ပဲလေ။ ကျနော်များ မနက်ဖြန် ကျနော်တို့ မြို့မှာ ရှိနေရင် . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:00 PM5ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
နာရီလက်တံတွေ တရွေ့ရွေ့နဲ့ ရွေ့လျားသွားတာ ဘာလိုလိုနဲ့ သင်္ကြန်တောင် ရောက်တော့မှာကိုး။ အသက်တစ်နှစ် ကြီးသွားအုံးမှာပေါ့။ ကျနော်လည်း မြန်မာသင်္ကြန်ကို မဆင်နွှဲရတာ နှစ်ကြိမ်တောင်ရှိသွား ပါကောလား။ အဝေးရောက်နေတော့ အရင်တုန်းက သင်္ကြန်အချိန်ကို ပြန်လည်သတိရလွမ်းဆွတ် မိတာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့တစ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ တိုးတက်ခေတ်မှီနေတဲ့ နိုင်ငံတွေကိုရောက်က် ဒီလိုသင်္ကြန်အချိန်အခါဆို မိခင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကို ပြန်ချင်ကြမယ်လို့ ကျနော်တော့ ခံစားမိတယ်။
သင်္ကြန်မှာ ပျော်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်ကြသလို ဥပုပ်သီလစောင့်တည်လို့ အကောင်းဆုံး အချိန်အခါလည်း ဖြစ်ပြန် တယ်လေ။ သင်္ကြန်ပွဲဆိုတာ ကျနော်တို့ဆယ့်နှစ်ရာသီပွဲတော်တွေထဲက အကြီးကျယ်ဆုံးပွဲတော်တစ်ခုပဲလေ။ ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ ချက်ချင်းပြေးပြန်ပြီး ရေပက်ချင်လာပြီးနော်။
သင်္ကြန်နဲ့ပက်သက်လို့ ကျနော်တို့နယ်အကြောင်း နည်းည်းပြောချင်တယ်ဗျ။ ကျနော်တို့နယ်မှာက သင်္ကြန်ရက်တွေကို မြို့တွေနဲ့သတ်မှတ်ပြီး လည်ကြတာလေ။ ကျနော်တို့မြို့ဆို သင်္ကြန် အကြတ်နေ့ကျတယ်။ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ဆို ဘာပြောကောင်းမလဲ မော်စီတို့ မိုးလင်းကတည်းက အိမ်ကနေထွက်တာ မိုးချုပ်လို့ ညဉ့်နက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်တယ်။ သိပ်မလည်ပါဘူး မြို့ပတ်ရုံလေးပဲ။ အကြတ်နေ့ဆို ကျနော်တို့မြို့က ဗဟိုမဏ္ဍပ်ကလည်း စည်သလားမမေးနဲ့ မပြောပြဘူး။ အရင်တုန်းကဆို နာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေလည်း လာတယ်ဗျ။ အခုတော့မသိတော့ပါဘူး နေပြည်တော်ဆိုတာကြီး ဖြစ်ကတည်းက တစ်ခြားမြို့တွေမှာ နာမည်ကြီး အဆိုတော်တွေ တော်တော်ရှားသွားတယ်။
အဲ အကြတ်နေ့ နှစ်ရက်ကျတဲ့နှစ်တွေဆို မော်စီတို့ အိမ်ကိုပြန်မရောက်ဖြစ်ဘူး။ သိပ်မလည်ရှာပါဘူးဗျာ။ အဲအိမ်ပြန်ရင်လည်း အ၀တ်စားလဲပြီးပြန်ထွက်တာပဲ။ ကျနော်တို့ ရေပက်မဏ္ဍပ်က မြို့ထဲအ၀င်ဝမှာ ဆိုတော့ ရေပက်ခံထွက်တဲ့ကားတွေ ကျနော်တို့မဏ္ဍပ်ကိုမလွတ်ဘူးလေ။ ရေပက်ခံထွက်တဲ့ကားတွေ နည်းည်းပါး သွားတဲ့ အခါမှာဆို မုန့်လုံးရေပေါ်တို့ ခေါက်ဆွဲကြော်တို့ လုပ်စားကြတယ် ပျော်စရာကြီးပေါ့။
အဲ ကျနော့်ကို မဏ္ဍပ်က အကိုတစ်ယောက်က အရည်တွေတိုက်တယ်ဗျ။ ဟိုလက်ဖက်ရည်ကြမ်း အရောင်လို ပုလင်းပြားလေးနဲ့ အချိုရည်နဲ့ရောထားတယ် သောက်လို့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ။ ကျနော်ကချမ်းနေ တာတောင် အဲဒါသောက်ပြီး မချမ်းတော့ဘူးဗျ။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ မဏ္ဍပ်မှာလူတွေများလာသလိုခံစားရတယ် ပျော်စရာကြီးပေါ့ဗျာ။ တစ်မျိုးမထင်နဲ့ ကျနော်လူတစ်ယောက်ကို နှစ်ယောက်လို့မြင်သွားတာနဲ့ လူများသွား တာလေ ဟဲဟဲ အပျော်ပါ။
ကျနော်တို့မြို့မှာက သင်္ကြန်ပွဲမှာ ရန်ဖြစ်တာတို့ဘာတို့ သိပ်မရှိဘူး။ အဲဒါလေးတော့ ကောင်းတယ်ဗျ။ ကျနော်တို့ မဏ္ဍပ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီး နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုဆွမ်းပို့တယ်ဗျ။ အဲနေ့လည် လောက်မှ ရေပက်ခံထွက်ကြတယ်။ ကျနော်ကရေပက်ခံထွက်တာ သိပ်မရှိဘူး ရေပက်ရတာကိုပဲ ပိုသဘောကျ မိတယ်ဗျ။ အရင်းတုန်းက သင်္ကြန်ရက်ကလေးတွေကို လွမ်းတယ်ဗျာ။ ဘာလိုလိုနဲ့ မြန်မာပြည် သင်္ကြန်နဲ့ဝေးခဲ့တာ နှစ်နှစ်တောင်ရှိပြီးကိုး။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းသော သင်္ကြန်ပွဲကို ကျနော်မော်စီ လွမ်းဆွတ်တမ်းတရင်း . . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:08 AM7ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
နောက်ဆုံးတော့ . . .
အော် . . .
ကျနော်တစ်ယောက်တည်းရယ် . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 6:48 AM3ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော် အခုတလော အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ နပန်းလုံးနေရပါတယ်။ ပိုစ့်အသစ်တင်ဖို့လည်း အဆင်မပြေနိုင်သေးသလို ဘလော့လည်ဖို့လည်း အခက်အခဲနည်းနည်းရှိနေပါသေးတယ်ဗျာ။ ကျနော်ပိုစ့်အသစ်တင်ဖို့ ကြိုးစားပါအုံးမယ်ဗျာ။ လာလည်တဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေကို အားလည်းနာတယ် ခင်လည်းခင်တယ်။ အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ကျနော်က အရမ်းရင်းနှီးနေတော့ ကျနော့်ဆီကို ခဏခဏလာလည်နေတော့ခက်တယ်ဗျာ။
ရေးသားသူ မော်စီ at 10:57 PM 1 ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်